पत्रकार राधा प्रधानको चित्कार - खबरम्यागजिन
पत्रकार राधा प्रधानको चित्कार
May 13, 2018 May 13, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि
गान्तोक, 13 मई।
सिक्किममा नब्बेको दशकदेखि लगातार रूपमा सक्रिय पत्रकारितामा रहेकी वरिष्ठ पत्रकार राधा प्रधानको दोस्रो मौलिक कृति चित्कार-को विधिवत लोकार्पण भयो। सिक्किम विश्वविद्यालयकी सह प्राध्यापक डा. कविता लामा मुख्य अतिथि रहेको कार्यक्रममा कथा र कविताको सङ्गालो चित्कार लोकार्पण गरियो।
प्रेस क्लब अफ् सिक्किममा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानले पत्रकारितासितै मौलिक साहित्य सिर्जनामा पुऱ्याएको योगदान सराहनीय रहेको बताउँदै मुख्य अतिथि डा. लामाले पत्रकारहरूको पेशा त्यसै पनि सङ्घर्षशील रहेको हुँदा हुँदै थप साहित्यकारको रूपमा पनि एक महिला पत्रकार भएर कार्य गर्नु ठूलो कुरा रहेको बताइन्।
उनले भनिन्, महिलाहरूले सधैँ हारेको गाथा कोर्ने गरेका छौं तर अब जीतको साहित्य लेख्नुपर्छ। सङ्घर्षमा जीतको खुसी बाँढेको कुरा लेखिनुपर्छ, भन्दै महिला पत्रकार भएर पनि साहित्यमा आफ्नो योगदानको निम्ति प्रधान बधाई र प्रंसशाको पात्रा रहेका बताइऩ्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पत्रकार प्रधानले आफ्नो यो कृतिको नाम चित्कार राख्नुको पछि वृद्ध अवस्थामा पुगेपछि माता पिताको जुन अवस्था हुन्छ त्यो वृद्धकालको व्यथा कस्तो हुन्छ त्यसलाई सिर्जनामा समेट्ने प्रयास गरेको बताइन्।
कार्यक्रमा उपस्थिति विशिष्ठ अतिथि उषा तामाङ र अन्यले पनि सम्बोधन गरेका थिए। पत्रकार पवित्र भण्डारीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा सिक्किम महिला पत्रकार सङ्घले प्रधानलाई अभिनन्दन पनि जनायो। अभिनन्दमा स्मृति चिन्ह, दोसल्ला र अभिनन्दन पत्र प्रदान गरिएको थियो। उल्लेख्यनीय छ प्रधानकै नेतृत्वमा सिक्किम महिला पत्रकार सङ्घ गठन गरिएको थियो। प्रधानको यो भन्दा पहिले एउटा लघु उपन्यास प्रकाशित भइसकेको छ।